Nyika shanu dzinoda muripo kubva kuIran nekuda kwevakadonhedza Ukraine Boeing
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Nyika shanu dzinoda muripo kubva kuIran nekuda kwevakadonhedza Ukraine Boeing
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kanada Breaking News • mhosva • Hurumende Nhau • Iran Kuputsa Nhau • nhau • chengetedzo • Sweden Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Ukraine Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Gurukota rezvekunze kuCanada Francois -Philippe Champagne vakazivisa kuti Canada, Afghanistan, United Kingdom, Sweden neUkraine vari kuda kuti Iran ivabhadhare muripo wevatakuri vekuUkraine. Boeing 737 jet yakapfurwa pasi nezvombo zveIran.
Sekureva kwegurukota, Iran inofanirwa kubvuma zvizere mutoro wendege yakadzikira uye kuzadzisa zvisungo zvayo kumhuri dzevakawirwa nedambudziko iri. Nyika dzinotarisira kuti muripo ubhadharwe nenguva uye zvinoenderana nemutemo wepasi rose.
Uye zvakare, Champagne inodaidzira kuongororwa kwakazara uye kwakazvimirira pachiitiko ichi.
Canada, Afghanistan, United Kingdom, Sweden neUkraine zvakagadzirawo rakakosha boka rinozozivisa hama dzevakauraiwa nezvekufambira mberi kwekuferefeta uye kuita mukupa rubatsiro rwavanogona kuda.
Ukraine International Airlines' Boeing 737 mutyairi akapfurwa pasi neIranian anti-ndege makomba uye akapunzika muna Ndira 8 muTehran. Somugumisiro, vanhu 176 vakaurayiwa - 167 vafambi uye vapfumbamwe vashandi. Mushure mekuramba chero kubatanidzwa mutsaona uye vachiti iyo ndege yakadonhedzwa nedambudziko remuchina, Iran yakazopedzisira yasungwa nehumboo husingarambiki uye yakamanikidzwa kubvuma mutoro wezvakaitika: General Staff of the Iranian Armed Forces vakati "vakanganisa" vakapfura pasi ndege yeUkraine, sezvo ivo "vakaikanganisa" kuita chombo chengarava.